Seho an-tsehatra « Nature sa Parfumé », hanentanana ny olona handray andraikitra hiaro ny tontolo iainana
Publié juillet 6, 2018 par Book News
Hotontosaina ny alahady izao ny seho an-tsehatra “Nature sa Parfumé”.
“Nature sa Parfumé”, seho an-tsehatra momba ny tontolo iainana
Hotontosaina ny alahady izao eny amin’ny efi-trano lehibe “Don Luigi” ao amin’ny Paroasy Notre Dame de Fatima Ambohimirary ny seho an-tsehatra “Nature sa Parfumé”. Seho an-tsehatra izay andraisan’ireo Skoto Katôlika avy ao amin’ny Paroasy anjara.[amazon_link asins=’B004JPKKY8,B07BNTSJHD,B01N6M0I9M’ template=’ProductCarousel’ store=’booknewsmada7-21′ marketplace=’FR’ link_id=’27e394c3-8121-11e8-bacc-578415270ce3′]
“Seho an-tsehatra miavaka ravahin’ny dihy, jijy, vaky sôva, hira no hotontosain’ireo skoto zazalahy katolika, 7 hatramin’ny 22 taona, miisa eo amin’ny 70 eo mandritra ny seho “NATURE sa PARFUME”, araka ny fanazavan’ireo mpikarakara.
Hiavaka ity seho ity satria mahakasika indrindra ny fiarovana ny tontolo iainana izy ity.
“Ny tsirairay avy no mila resy lahatra sy miroso amin’ny fandraisana andraikitra dieny izao, satria “ny anio tokoa no antoky ny hoavy”. Ny tanjona araka izany dia ho olona resy lahatra, vonona ary tompon’andraikitra hiroso amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ireo rehetra tonga manatrika aorian’ny hetsika.”, hoy ny filazana.
Sarina mpikambana avy amin’ny Antilin’I Madagasikara ao amin’ny Paroasy Ambohimirary, miaraka amin’ny fikambanana Mahatsangy sy « Juene ».
Voasokajy anatin’ireo firenena marefo manoloana ny fiovan’ny toetr’andro i Madagasikara. Mahatsiaro noho izany ireo Skoto avy amin’ny Antilin’I Madagasikara fa manana andraikitra amin’ny fanentanana sy fanabeazana ny olona hiaro ny tontolo iainana.
Ny fikambanan’ny “Antilin’I Madagasikara” Fivondronana faha 39 avy amin’ny Paroasy Ambohimirary araka izany no miara-miasa amin’ny Fikambanana “Mahatsangy” (na Météo, Antoka HAmpamiratra TSara AN’I GasYkara) sy ny Fikambanana “Jeune” (na Jeunes Engagés et Unis pour une Nation Epanouie) mikarakara izao hetsika izao.
Nanambara ireo mpikarakara avy amin’ny Skoto fa santatra ambava rano ihany ity hetsika ity.
“Tsy hijanona eo anivon’ny Fiangonana ny hetsika fa hiitatra manerana an’i Madagasikara ary hiarahana miasa amin’ireo Skoto manerana ny Nosy.”
– “Anjara fanatsarana” 1.000 Ar ho an’ny olona 2
– Fanasàna: 5.000 Ar ho an’ny olona 2
Ny vola azo amin’ity hetsika ity dia hanatanterahana ny Fambolen-kazo Pastoraly amin’ny taom-pamokarana ho avy.